के फेसबुक धेरै चलाउनु राम्रो हो ? | Hamro Patro
अहिले हामीले नै पनि फेसबुक चलाँउदा केही साता यता म्यासेन्चरमा केही समस्या पाइरहेका छौं, कारण हो यिनै निर्माणका प्रक्रियाहरु ।
संसारभरिका करोडौं प्रयोगकर्ताहरुले फेसबुकमा समय बिताउने गर्दछन्, अब त व्यापार, शिक्षा लगायतका आधारभूत जानकारी अनि आर्जन प्रक्रिया पनि फेसबुक मार्फत नै हुन थालेको छ । यस अवस्थामा फेसबुकका हरेक फिचर, बटन अनि सुबिधाको असर करौडौं करोड मान्छेहरुलाई पर्ने गर्दछ ।
फेसबुकले गरेका केही रिसर्चहरु अनुरुप केही फिचरहरुले डिप्रेशन या आत्मबिश्वासको कमी लगायत एकग्रतामा कमी सम्म आउने संभाव्य पनि देखाएका छन् । अहिले भर्खरै फेसबुकले ल्याएको बालमैत्री फेसबुक र मेसेन्जरलाई त झन संबेदनशील भएर हेर्न जरुरी छ, किनभने अहिलेका बालबालिका सानै उमेरदेखि लाइक्स र पोष्ट शेयरको अर्थशास्त्तमा लोभी भएर लागेमा संसारको भविष्य उत्ति मानसिक र बैचरीक् स्वस्थ पथमा कहाँ जान सक्ला र ?
बिश्वभरि नै एउटा बहस भने चलिनैरेहेका छ कि बालबालिका या वयस्क जोसुकै भएपनि सामाजि सञ्जालमा अत्याधिक समय बिताउन स्वस्थ हो त ?
उता फेसबुक लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालका साइटहरुको मुख्य आय नै प्रयोगकर्ताहरुको यि प्लाटफर्ममा बितेको समयका आधारमा हुन्छ, सीएनएन ले लेखेको छ । फेसबुकले ३० दिने एउटा नयाँ फिचर थप्ने भएको छ, म्यूट फिचर । फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुलाई आफूले हेर्ने अनि जान्ने पोष्टहरुमा थप नियन्त्रण दिदै फेसबुकले यस म्यूट फिचर थप्न आँटेको हो । टिभीमा म्यूट थिचेपछि आवाज नआउने जस्तै फेसबुकमा कुनै ग्रुप, च्याट या साथीलाई म्यूट गरेमा उसको केही अपडेट र टेक्सटहरु फेुसबुकमा नआउने कार्य यो फिचरले गर्दछ । अनि यसरी हामीले म्यूट गरेका मान्छे या समुहलाई भने म्यूट गरेको जानकारी फेसबुकले दिदैन । अहिले हामीले नै पनि फेसबुक चलाँउदा केही साता यता म्यासेन्चरमा केही समस्या पाइरहेका छौं, कारण हो यिनै निर्माणका प्रक्रियाहरु । फेसबुकका पूर्व अधिकारी चमथ पाइलापिथीयाले सीएनएन संग आफूहरुले फेसबुकमा हुँदा बनाएका केही सामाजिक धरातलले समाजको सामाजिककरण नै उल्टो पारेको र नकारात्मक बनाएको हुन सक्ने बताएका थिए । अर्का फेसबुकका लगानीकर्ता सीन पार्करले पनि फेसबुकले मान्छेको सामाजिककरणको जोखिम र भावनात्मक संक्रमणलाई फेसबुकले फाइदा लिएको बताएका छन् । उनी आफू स्वयम फेसबुकको बालसुलभ भावना, सम्बन्ध अनि प्रेममा पर्ने असरप्रति चिन्तीत रहेको बताए ।
फेसबुकले बाल मैत्री म्यासेन्जर बनाउने क्रममा बिभिन्न आलोचनाहरु खेप्दै आएको छ भने अहिले सार्वजनीक रुपमै फेसबुकलाई गाली गर्दै अनि आक्षेप लगाउने पोष्टहरु बढ्दै गएको बताइएको छ ।
फेसबुकको रिसर्च बिभागका प्रमुख डेभिड गिन्बर्गले भने भावनात्मक अनि मनोसामाजिक परिवृतीमा पर्ने असरहरुमा फेसबुक चनाखो र संवेदनशील रहेको बताएका छन् । बालबालिकामा फेसबुुकले पार्ने लामोसमयसम्मको असरलाई बुझ्दै फेसबुकले चित्ताकर्षक अनि प्रभावकारी बालमैत्री भर्जन ल्याउने उन्को प्रतिबद्धता छ । अमेरिकाको सान डियागो यूसी बिश्वबिधालयकी मनोसामाजिक बिषयकी प्राध्यापक होली शाक्यका अनुसार सामाजिक सञ्जालले प्रत्यक्ष भेटघाट र आँखाको चाल अनुसार भएका सञ्चार जस्तो आत्मियता नुहने बताइन् । मान्छेको स्पर्श, आत्मियता, शव्दको निकटता लगायतका भौतिक गुणहरु सामाजिक सञ्जालले सम्बोधन नगर्ने बताइन, यसरी धेरै सामाजिक सञ्जालमा समय बिताएमा मान्छे झनै एक्लो र दुबिधामा हुने उनको भनाइ छ । नेपाली समाज पनि चियागफवाट शुरु भएर अगेना गफमा समाप्त हुन्छ । भेटघाट, हातेमालो अनि साथमा चियाको कप नेपाली कुराकानीको आधार हो, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालको सिमीत प्रयोग नै मानसिक अनि सामाजिक स्वास्थका लागि उत्तम हुने देखिन्छ । सबैजना सजग हुन जरुरी छ ।